Kuza okusha ohlelweni Isencane Lengane
IZOKHOMBISA impilo njengoba sebezimele isizini entsha yohlelo Isencane Lengane ekhombisa abaganene, uSiyacela noThando, nezoqala kuMoja Love ngesonto elizayo ISITHOMBE: SIGCINIWE
KUZOGQAMA impilo yabo sebezimele uThando nomyeni wakhe, uSiyacela Dlamuka, bodumo lohlelo oluthi Isencane Lengane kuMoja Love.
Lokhu kuvele emazwibeleni alolu hlelo njengoba kugqama ukuthi kule sizini entsha, ezoqala ngoJuni 5 ngo-9.30 ebusuku, lezi zithandani zizobe sezizimele.
Okunye okusha ngawo wukuthi usuzodlala isikhathi esiyihora.
ULindiwe Mbonambi, weMoja Love, uthe uhlelo luzoqala lukhombise uThando esakhulelwe kuze kufike isikhathi sakhe sokubeletha.
“Bazovela sebezimele njengoba sebehlala eThekwini futhi bengasahlali nabantu abadala. Kuzovela ukuthi baphila kanjani njengoba impilo isibhekene nabo ngqo. Uhlelo luzogxila kakhulu ekutheni bazikhulisa kanjani bona futhi bayithola injani impilo yokuzimela. Bazokhombisa ukuthi kube njani ukuqala umndeni futhi isimo sinjani njengoba bengasekho oLundi phambi kukaDlamuka nomndeni wonke,” kusho uLindiwe.
Uthe okunye okuzogqama ohlelweni yizingqinamba uThando abhekene nazo ezingase ziphazamise indlela eya phambili njengoba efuna ukuqhubeka nemfundo.
“Siyazi ukuthi uThando ubefuna ukuba ngusonhlalakahle, zonke lezo zimpendulo zizovela kule sizini entsha ukuthi ngabe uyaphumelela yini. Imibuzo abantu okumele bahlale benayo emqondweni njengoba kuqala le sizini ukuthi ngabe uSiyacela usekhule ngokwanele yini njengoba esewubaba,” kusho uLindiwe.
Ezinye izinhlelo ezintsha ezizobonakala kuMoja Love yiComing Out ezoqala ngoJuni 18, ngo-9.30 ebusuku, kube oluthi Umakhelwane oluzoqala ngoJuni 12 ngo8.30 ebusuku noluthi Ishushu oluqala ngoJuni 8 ngo-6 ntambama.
ULinda Sibiya uzoshayela uhlelo oluthi Unzima Umshado, oluzoqala ngoJuni 12 ngo-8 ebusuku kulesi siteshi.